Safarrada gudaha iyo gaadiidka dadweynaha - Krisinformation.se
TB3 Inrikesresor och kollektivtrafik So
Faafitaanka ballaaran ee feyruska cusub ee corona wuxuu keenayaa in xaaladda rakaabka iyo musaafiriinta ay degdeg isu beddeli karta. Waxaa halkan ku jira macluumaad ku saabsan waxa aad adigu ka musaafir ahaan u baahantihid in aad ka fikirtid. Adiga naftirkaaga ma’uuliyad ayaa kaa saa-ran in aad waxa dhacaya la socotid oo aad go’aan gaartid adiga oo wax og.
Ka hor intaanad safrin
Waxa safarka Iswiidhan gudaheeda ah shaqeynaaya waa inaad iska ilaaliso saxmad/ciriiri badan, gaadiidka dadweynaha ee aan laheyd booska/kursiga la qabsanaayo/la xajisanaayo iyo inad iska ilaaliso inaad la kulanto dad cusub oo aan ahayn kuwa aad caadi ahaan la dhaqanto/kulanto. Waa inaad sidoo kale isku karantiimeyn kartaa meesha aad u safreyso oo aad guriga si amaan ah ugu aadi kartaa haddii aad calaamado covid-19 ah isku aragto.
Talooyin ku saabsan si looga fogaado saxmad/ciriiri badan iyo faafinta cudurka:
Kaliya safar haddii aaad ku qasban tahay uun - markasta guriga joog haddii aad calaamado leedahay.
Ka fogow safarka wakhtiga saxmada badan jirto.
Marka hore isticmaal qaabab kale ee safarka ee aan aheyn ka gaadiidka dadweynaha haddii aanad tigidh aad boos ku qabsato sameysan karin.
Masaafad u jirso - xitaa waddooyinka.
Gaar ahaan inaad guriga ugu aadi karto si fayruska amaan ka ah haddii aad meesha aad u safrayso ku bukooto/xanuunsato.
Laga bilaabo 7 Janaayo ayaa la iskula talinayaa in af dhowre/af gashi la xidhnaado gaadiidka dadweynaha dhexdiisa wakhtiga saxmada badani jirto.
Inta lagu jiro safarkan
Shirkado badan oo gaadiidka ah waxay hayaan macluumaad ku saabsan faayraska cusub ee koroona. Gal bogga intarnatka ee shirkada safarka si aad u hesho warbixin ku saabsan nidaamyada cusub iyo waxa ansax ku ah khadadka ama masaafooyinka aad ku safrayso. Raac tilmaamaha ka imanaya maamulka gaadiidkan. Xiriiryada boggagan waxay ku aadanyihiin boggag ah af Iswiidhish.
Hey’adda Jidadka macluumaadkeeda
Gegida diyaaradaha macluumaadkeeda oo urursan
Maamulka gobolka Norrbotten kuna saabsan xadeynta dhanka safarada Finlaand iyo Noorway
Tareenada SJ kuna saabsan khadadka bixitaanka ee la joojiyay iyo yaraynta gaadiidkooda
Gaadiidka Skånetrafiken kuna saabsan safarada dhanka Daanmaark
Gaadiidka Stockholms lokaltrafik (SL) kuna saabsan nidaamyada cusub ee gaadiidka dadweynaha ka dhaxeeya
Gaadiidka Västtrafik maclumaadkeeda
Shirkada Waxholmsbolaget kuna saabsan gaadiidka jardiinooyinka badda ee Stockholm
Hey’adda gaadiidka, ku saabsan badmaaxnimada iyo covid-19
Farac urureedka Svensk Sjöfart, ku saabsan badmaaxnimada iyo covid-19
Hey’adda gaadiidka, ku saabsan waxa ay tahay in aad ka fikirtid marka aad is leedihid diyaarad raac
Hey’adda gaadiidka, ku saabsan tallaabooyinka la qaaday ee xagga duullimaadka Iswiidhishka